असारे विकास | Nagarik News - Nepal Republic Media
तारानगरमा असार अन्तिम साता बनाइएको कालोपत्रे सडकमा दुई हप्ता नबित्दै दुबो उम्रिनुका साथै प्वाल परेको छ।
पुष्पराज जोशी १३ श्रावण २०७८ बुधबार २ मिनेट पाठ
प्रदेश र संघीय सरकार नै असारे विकासका कारक, दोष स्थानीयलाई : नगरप्रमुख थापा
उनले सोही कारण स्थानीय तहले असारे विकास भएको देखिने बताए। ‘असारे विकासलाई नसुधारी हुन्न, प्रदेश र संघीय सरकारले जेठमा सम्झौता गराउँछ, अनि असारे विकास गर्यो भनी स्थानीय सरकारलाई दोष।’ उनको भनाइ छ।
नागरिक २६ असार २०७८ शनिबार २ मिनेट पाठ
मिथिलेश यादव २५ असार २०७८ शुक्रबार २ मिनेट पाठ
मिथिलेश यादव ३० असार २०७७ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
पुष्पराज जोशी २८ असार २०७७ आइतबार २ मिनेट पाठ
मिथिलेश यादव, रोहित महतो र उपेन्द्र यादव २२ असार २०७७ सोमबार ६ मिनेट पाठ
रेखा भुसाल र विनोद परियार १२ असार २०७७ शुक्रबार ५ मिनेट पाठ
आमनागरिकको यो खुसी भने धेरै टिक्न पाएन । असार लाग्दा/नलाग्दै भर्खरै कालोपत्रे गरिएका राम्रा सडक धमाधम भत्काउने काम सुरु भएको छ । भत्काउने पनि कसरी ? भत्काइसकेको सडकमा तत्काल काम सकेर पहिलेकै अवस्थामा छाडिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । सडक भत्काएर असरल्ल छाडिदिएपछि आमनागरिक त्यसै निराश हुने अवस्था आउँछ ।
नागरिक १२ असार २०७७ शुक्रबार ४ मिनेट पाठ
रेखा भुसाल र विनोद परियार १२ असार २०७७ शुक्रबार २ मिनेट पाठ
विकास बजेटलाई अन्तिम समयमा खर्च गरेको देखाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश तथा प्रतिनिधी सांसदहरू असारे विकासमा केन्द्रित भएका छन्।
उपेन्द्र यादव ११ असार २०७७ बिहीबार २ मिनेट पाठ
असारे विकासको बेथिति : घर भत्काएर कालोपत्रे बाटो
बास मासेर विकास स्वीकार्य हुन्छ ? अहँ हुँदैन । विकासका लागि उठीबास लगाउन पाइन्छ ? अहँ पाइँदैन । बाटो बिस्तार गरी कालोपत्रे गर्ने नाममा घरको बार्दलीमुनिको भाग (पेटी) नै भत्काएर भर्याङको मुख त्यही बाटोमै खुल्ने अवस्था आएपछि उनले पनि अस्वीकार गरिन् । तर असारे विकासको नसामा डुबेको समाजको अगाडि उनको केही लागेन ।
सूर्यप्रकाश कँडेल १० असार २०७७ बुधबार ४ मिनेट पाठ
दिलबहादुर छत्याल ८ असार २०७७ सोमबार ४ मिनेट पाठ
कर्णालीमा असारे विकास सुरु भएको छ । गुणस्तरीय कामभन्दा बजेट सक्नेमा तल्लो तहका सरकारदेखि उपभोक्ता समिति सक्रिय छन् । कतिपय ठाउँमा वर्षाको प्रवाह नगरेर काम गरिएको छ । यसरी गरेको काम गुणस्तरीयभन्दा काम चलाउ हुने र दीर्घकालीन नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।
गणेश विशु ८ असार २०७७ सोमबार ३ मिनेट पाठ